Nepali Rajneeti | मनोज गजुरेलले दोश्रो बिवाह गरेको थाहा पाएपछि, पुर्व पत्नी मीनाले दिईन यस्तो प्रतिकृया
अषोज २६, २०७८ मंगलबार ४४४ पटक हेरिएको
यस्तो छ मनोजको स्टाटस आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुमा सुखद जानकारी ! जीवन सधैँ सरल रेखामा नहिँड्ने रहेछ। मेरो लामो वैवाहिक जीवन ४ वर्ष पहिले कानुनी रुपमा टुंगिएको कुरा यहाँहरुलाई विदितै छ। त्यसयता म मेरा छोरा र छोरीको एकल अभिभावक भएर बसिरहेको जानकारी पनि जगजाहेर नैतिकताको छ।
विगतका अराजक अन्तर्वार्ता, असामाजिक क्रियाकलाप तथा अ’भद्र व्य’वहार’का कारण म र मेरा छोराछोरीले ठूलो आ’घा’तबाट गुज्रनु परेको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई स्थान दिने, उचा ल्ने र गिजो ल्ने युट्युब, अनलाइन समाचार, टिकटक लगायत संजालका प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि भद्र सुझाव छ- कृपया एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर बोल्ने र लेख्ने गर्नुहोला। सामाजिक सञ्जालको चरम दुरुपयोगले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पार्न सक्ने गम्भीर असरलाई पनि महशुस गर्नुहोला।
अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्ण आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउँछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवकाे दर्शन गर्यौँ। त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यहीँ विवाह सम्पन्न गर्यौँ।
अनि, सपरिवार मानव सेवा आश्रम (कौशलटार)मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएर/खाएर विवाह सम्पन्न गरेका छौँ । परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशीर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद।
मनोज गजुरेलको बिवाहको घोषणा लगतै उनकी पुर्वपत्नी मिना गरुरेलले पनि केहि प्रतिकृया दिएकी छन् । मनोजको बिवाह पछि उनलाई सामाजिक संजाल मार्फत बिभिन्न कमेन्ट र म्यासेज आउँन थालेपछि उनले यो सबै बन्द गर्न र म्यासेज नगर्न अनुरोध गर्दै फेसबुकमा स्टेटस राखेकी छन् ।
उनले सामाजिक संजालमा अर्का चर्चामा रहेका मुकुन्द घिमिरेको स्टेट्सलाइ शेयर गर्दै मनोज गजुरेल प्रति व्यंग्यात्मकरुपमा उनलाई जिस्क्याएकी छन् । यो ताजा खबरबाट साभार गरियको खबर हो ।
इन्द्रेणीका छत्र शाहीको बिहेमा किन गएनन् कृष्ण कंडेल ? कारण यस्तो छ हेर्नुहाेस